अर्थमन्त्री नै बाफियाबारे अनविज्ञः बैंक सञ्चालकहरुलाई भने “तपाईहरु विदेशमा शाखा खोल्नुस” - Arthatantra.com
अर्थमन्त्री नै बाफियाबारे अनविज्ञः बैंक सञ्चालकहरुलाई भने “तपाईहरु विदेशमा शाखा खोल्नुस”
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक सञ्चालकहरुलाई विदेशमा शाखा खोल्न आग्रह गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले आज राजधानीमा आयोजना गरेको संस्थाको दोस्रो वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो अभिव्यत्ति दिएका हुन् ।
“साउथ कोरियामा तपाईहरु कसले खोल्ने हो शाखा ? शाखा खोल्नुस, स्वीकृति लिनुहोस । बैकिङ्ग प्रणालीबाट अलिक नआएको भनेको कोरियाबाट हो भन्ने बुझेको छु, त्यहाँ हाम्रो बैंकका शाखाहरु रहेनछन्, तपाईहरु कसैलेपनि खोल्न सक्नुहुन्छ । बरु भन्नुस त्यसको लागि के सहयोग चाहिन्छ । इजरायल, जापान लगायतका देशहरुमा यस्तो समस्या रहेछ, सिधै बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स ल्याउनका लागि के समस्या छन् भन्ने कुराको पहिचान भएका छन्, त्यस्ता देशहरुमा पनि यहाँहरुको भूमिका होस भन्ने म चाहन्छु ।” उनले भने ।
अर्थमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिबाट यो पुष्टि हुन्छ कि उनलाई बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) भन्ने नै थाहा छैन । यदि बाफिया सम्बन्धमा केही ज्ञान भएको भए उनले यसरी गैर जिम्मेवारी पूर्वक बैंक सञ्चालकहरुलाई विदेशमा शाखा खोल्न आग्रह गर्ने थिएनन् । उनलाई थाहा हुनुपर्ने हो कि नेपाली बैंकहरुले अहिलेको कानुन अनुसार विदेशमा शाखा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था नै छैन भनेर ।
केही दिन अघिमात्रै सिबिफिनले राष्ट्रबैंकलाई विदेशमा शाखा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ । सिबिफिनको माग प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्र बैंकलाई यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्नको लागि सल्लाह दिएको जस्तो देखिन्छ । किनकी सिबिफिनकै एक पदाधिकारीले माग राख्दा साथ राष्ट्र बैंकले अनुमति दिने भन्ने नहुने र राष्ट्र बैंकले अनुमति तत्कालै दिए शाखा खोलिहाल्छौँ भन्ने अवस्थामा बैंकहरु पनि नरहको बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री शर्माको विदेशमा शाखा खोल्न आवस्यक सहयोग गर्छु भन्ने अभिव्यत्तिबाट यो पनि स्पष्ट हुन्छ कि उनलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रको बारेमा पनि पनि ज्ञान छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि शाखा विस्तार लगायतका सम्पूर्ण नियमन सम्बन्धि कार्य अर्थमन्त्रालय नभई राष्ट्र बैंकले गर्छ भन्नेमा पनि उनी जानकार नभएको स्पष्ट देखिन्छ ।
यसो त, अर्थमन्त्री शर्माले यो भन्दा अगाडी नै एक सार्वजनीक कार्यक्रमै आफुले अर्थशास्त्र नजानेको स्विकारी सकेका छन् । “अर्थशास्त्र भनेको के होला ? मलाई थाहा छैन ।” भन्ने उनको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बनेको थियो ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले बैंकहरुलाई क्षेत्र विस्ता गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । उनले भने “हामीले भर्खरै एउटा नीति लिएका छौँ जसले तपाईहरु(बैकरहरु)लाई क्षेत्र विस्तार तथा लगानी ल्याउन सजिलो भएको छ । अब विदेशी मुद्रामा सजिलै खाता खोल्दीन सक्नुहुन्छ ।”
साथै अर्थमन्त्री शर्माले नीतिगत सहजिकरण गरिसकको बताउँदै गैर आवासिय नेपालीहरुले विदेशमा नेगेटीभ ब्याजदरमा डिपोजीट गरेकोे पैसा यहाँको पोजेटिभ ब्याजदरमा ल्याउन आग्रह गरे । उनले थपे “यसमार्फत थुप्रै पैसा नेपालमा लगानीको रुपमा आउने सम्भावना देखेको छु मैले ।”
विश्वभरका नेपालीहरुको डलर खाता सञ्चालनका लागि प्रचारप्रसार गर्न समेत आग्रह गरे । साथै कतिपय बैंकहरुले सुरु गरेको जानकारी गराउँदै बधाई समेत दिए ।
साथै यो पहलबाट तरलता अभावको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान हुन सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।
विदेशमा शाखा खोल्न बैंकको मागः पुँजी पलायनको बैधानिक मार्ग
वि.सं.२०७८ पुस २६ सोमवार १४:५८ मा प्रकाशित
अघिल्लाे तरलताको समस्या हट्दै, हप्तामै कर्जाको तुलनामा ६३७ प्रतिशतले बढ्यो निक्षेप
पछिल्लाे सेयर बजारमा उत्साह: १९.४३ अंकले बढ्यो, ७ अर्ब बढीको कारोबार